Home Wararka Weerar ay dad ku dhinteen oo ka dhacay deegano hoos yimaada...
Weerar ay dad ku dhinteen oo ka dhacay deegano hoos yimaada Balanbale
Waxaa weerar loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan xalay lagu qaaday tuulo hoostegta deegaanka Balanballe ee Gobolka Galgaduud, kaasi oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Rag hubeysan oo maleeshiyo beeleed ayaa weerarkaas ku qaaday saddex qof oo ku sugnaa tuulada Garasle ee Galgaduud, waxaana falka kadib goobta ka baxsaday raggii ka dambeeyay, sida ay sheegayaan wararka la helayo.
Wararka aya asheegay in inta la xaqiijiyay saddex qof oo mid ay haweeney tahay ayaa ku geeriyooday weerarka, halka qof kalena uu dhaawac soo gaaray, waxaana la sheegay in weerarka uu la xiriiray Arrimo ku saabsan aano qabiil. Maalmo kahor ayey markii tuulada Garasle ee hoostegta deegaanka Balanballe Gobolka Galgaduud uu ka dhacay dagaal geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo dhexmaray laba maleeshiyo beeleed oo hubeysan.
Si kastaba deegaano iyo degmooyin ka tirsan Maamulka Galmudug ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyay kusoo badanayay dagaal beeleedyada iyo dilalka qorsheysan ee la xiriira aanooyinka qabiil, waxaana xusid mudan in dagaalada qaarkood dhacay heshiisyo laga gaaray.
[XOG] Madaxda DG oo raba in Deegaan Doorashada laga dhigo Lix magaalo
Dowlada Sacuudiga oo shaacisay in Xajka sanadkaan la xadiday
[XOG] Madaxda DG oo raba in Deegaan Doorashada laga dhigo Lix...